August 8, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Ethiopia News August 8, 2020
From Outside, Ethiopia’s Disapora Pushes for Change VOA Learning EnglishSii akhriso
Cayaaraha August 8, 2020
(Yurub) 08 Agoosto 2020. Kooxda Barcelona ayaa si raaxo leh isaga xaadirisay wareega siddeeda ee tartanka Champions League, kaddib markii ay 3-1 ku garaacday Napoli oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou, waxayna Blaugrana isku darka labada lugood awooday inay ku soo baxdo 4-2. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 3-1 ay ku hoggaamineysay […]Sii akhriso
(Yurub) 08 Agoosto 2020. Bayern München ayaa markale dubatay kooxda Chelsea isla markaana iska xaadirisay siddeeda Champions League, kaddib markii ay ku adkaatay 4-1, kulan xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Allianz Arena, waxayna cel-celis ahaan Bayern ku adkaatay labada kulan 7-1. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-1 ay ku hoggaamineysay […]Sii akhriso
Suicide bombing kills at least 9, injures 20 at Somali military base – UPI News
Somali News August 8, 2020
Suicide bombing kills at least 9, injures 20 at Somali military base UPI NewsSii akhriso
(Turino) 08 Agoosto 2020. Kooxda reer Talyaani ee Juventus ayaa si rasmi ah u shaacisay in Andrea Pirlo ay u magacowday macalinkeeda cusub. Isagoo saxiixay heshiis dhacaya bisha June 2022. Madaxweynaha kooxda Juventus ee Andrea Agnelli ayaa Andrea Pirlo u doortay inuu noqdo bedelka macalinka reer Talyaani Maurizio Sarri. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa maanta […]Sii akhriso
(Yurub) 08 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Bayern München ayaa naadiga Chelsea ku soo dhoweynaysa garoonka Allianz Arena si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta labaad wareega 16-ka ee tartanka Champions League. Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan labada kooxood Bayern München iyo Chelsea. Haddaba halkaan hoose ka Sii akhriso
(Yurub) 08 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa naadiga Napoli ku soo dhoweynaysa garoonka Cump Nou si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta labaad wareega 16-ka ee tartanka Champions League. Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan labada kooxood Barcelona iyo Napoli. Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka […]Sii akhriso
(Madrid) 08 Agoosto 2020. Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa fariin u diray taageerayaasha Los Blancos, kaddib markii laga reebay tartanka UEFA Champions League. Manchester City ayaa u soo baxday wareegga Siddeeda ee tartanka Champions League, kaddib markii ay kaga adkaatay Real Madrid 2-1, kulankii lugta labaad ee wareega 16-ka, taasoo ka dhigan in […]Sii akhriso
Ethiopians struggle to cope with COVID-19 fears – Anadolu Agency
Ethiopians struggle to cope with COVID-19 fears Anadolu AgencySii akhriso
Soomaaliya August 8, 2020
Muqdisho.(SONNA):- Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa Magaalada Muqdisho kula Kulmay Safiir ku-xigeenka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Tabio Massimo,waxayna ka wada hadleen wax ka qabashada Arrimaha Fatahaadda Beledweyne, waxaana Dowladda Talyaaniga ay ogolaatay Mashruuci in dhowaanba la sugayay ee ka hortaga Fatahaada Sii akhriso